I-Brexit ne-Italiya ziya kudweliswa kwimarike yempahla kule veki | Ezezimali
Isivumelwano phakathi kweNgilani kunye neManyano yaseYurophu malunga nokusetyenziswa kweBrexit kunye nohlahlo-lwabiwo mali jikelele ekufuneka urhulumente wase-Itali azise zona ziya kuba sisiseko sokuvela kweemarike zezabelo kwiveki ephelileyo ka-Novemba. Ngokomgaqo, yonke into ibonakala ibonisa ukuba izakuqala kwindlela ephezulu kuba yonke into ibonakala ngathi ezi ngxaki zinako hlala ngendlela eyonelisayo ukulungiselela umdla wabatyali mali abancinci nabaphakathi. Emva kweveki apho isalathiso somgangatho wesizwe, i-Ibex 35, yehle ngaphezulu kancinci kwi-1,50% kwiiseshoni ezintlanu zokurhweba.
Kwelinye icala, kule veki kuya kukhutshwa isalathiso sokuzithemba kweshishini IFO yaseJamani kunye ne-Eurozone, ngelixa i-US iya kukhupha iibhondi zeenyanga ezintathu nezintandathu kunye nenqaku leminyaka emibini. Ziya kuba zezinye ezichaphazelekayo eziya kuthi zichaze, ngandlela thile okanye enye, indlela eya kuthatha, hayi kuphela i-stock stock yaseSpain, kodwa nehlabathi liphela. Kwaye nangayiphi na imeko, izakukhapha indlela iimarike zezemali ezetyisa ngayo izivumelwano ezibalulekileyo ekuxoxwe ngazo kwingqungquthela ye-European Union malunga neBrexit kwaye ibibanjwe kule mpelaveki.
Ngelixa ngokuchaseneyo, kwaye ngokubhekisele kuqoqosho lwaseMelika, onke amehlo aya kujoliswa kwisalathiso seshishini lokuvelisa Dallas Fed kunye noqikelelo lwayo olukhomba kwinqanaba le-105,90. Enye yedatha efanelekileyo kulo mmandla yile ibhekisa kwisalathiso somsebenzi sikazwelonke saseChicago Fed, esiya kukhutshwa kamva kule veki. Ke ngoko kunedatha eninzi ukuba abatyali mali abancinci nabaphakathi kuya kufuneka bayetyise ukuze bakwazi ukuthatha ezona zikhundla zilungileyo ukwenza ukuba iiasethi zabo zibenenzuzo.
1 I-Brexit: kufuneka ixhase intengiso yemasheya
2 Ukuvunywa kwePalamente yesiNgesi
3 Ukulungiswa kwengxaki yase-Itali kulindeleke
4 Umngcipheko wokuwa okukhulu
5 Ilinde isipho seKrisimesi
6 Ixesha elifanelekileyo lotyalo-mali
I-Brexit: kufuneka ixhase intengiso yemasheya
Isivumelwano ekufikelelwe kuso ekuphumeni kwe-Bhritane kwi-European Union kulindeleke ukuba sibe sesona siphumo sisebenzayo kwizabelo kwizibambiso ezidwelisiweyo ezonyuka emva kokuhla okutsha kwiinyanga ezidlulileyo. Hayi lilize, abanye babahlalutyi abachaphazelekayo kwiimarike zezemali bathi ingaqala kuphuhliso lwendabuko Irally yeqela lekrisimesi. Nangona abatyali mali bezentengiso besazi kakuhle, impendulo yeemarike zezemali ayinakulindeleka kuba ihlala ithengwa ngamarhe kwaye ithengiswe xa iindaba ziqinisekisiwe. Ngaba kuya kuba yimeko efanayo kule meko?
Kwelinye icala, ngokuqinisekileyo kuya kubakho iindawo ezithile eziza kuba novakalelo ngakumbi kolu hlobo lweendaba. Zombini ngengqondo nakwezinye, njengoko kwenzekile kule minyaka idlulileyo. Ngexesha elinye lonyaka ukuthembela kwiimarike zezemali kunokuba yinto exhaphakileyo kuninzi lweziqinisekiso ezikuluhlu. Kwiiseshoni ezilandelayo iiarhente ezahlukileyo zemali izakushiya amathandabuzo, zombini ukuthenga nokuthengisa izabelo kwimarike yemasheya. Xa kusele inyanga enye kuphela ukuba uphele lo nyaka unengxaki yeemarike zezabelo.
Ukuvunywa kwePalamente yesiNgesi
Ngayiphi na imeko, eyona ngxaki inkulu yokuqhubela phambili kwiimarike zesitokhwe iya kuxhomekeka kwimvume yexesha elizayo IPalamente yaseBritane yentlanganiso ebibanjwe namabhunga olawulo e-European Union. Ke ngoko, akuyi kubakho khetho ngaphandle kokulinganisa imisebenzi eyenziwe kakuhle kakhulu. Kungenxa yokuba, impendulo yokuqala yeemarike zesitokhwe ngalo Mvulo ibicacile, inombulelo nge-Ibex 35 ejikeleze i-2%. Ziibhanki ezikhokele oku kunyuka emva kwesohlwayo esinzima esifunyenwe kwiiveki ezidlulileyo. Inkqubela phambili yeSabadell, i-BBVA, i-Bankia okanye i-Santander ibingaphezulu koku kwaphawulwa ngamanye amacandelo emivuzo eguqukayo.
Oku kusabela kweemarike zezemali kukhokelele kwisalathiso esikhethiweyo kwimarike yaseSpain yokucinezela amanqanaba e Amanqaku e-9.200. Nangona kwiintsuku ezizayo uphuhliso lwayo luya kuba lubalulekile ukubonisa ukuba ngaba yinto nje enye okanye enye into ebambekayo enokuthi ithathe lo mthombo wesalathiso wentengiso yesitokhwe uye kwiindawo eziphakamileyo. Apho elinye lamanqaku aphambili ekubhekiswa kuwo aya kuba yinkxaso eyomeleleyo inamanqaku e-9.500 kwaye anokukhokelela kwinqanaba eliphezulu lexabiso.
Ukulungiswa kwengxaki yase-Itali kulindeleke
Ngokumalunga nohlahlo-lwabiwo mali oluthunyelwe eBrussels ngu Urhulumente wase-Itali, ngoku yonke into ibonakala ibonisa ukuba sisicwangciso se-transalpine ukufezekisa iimeko ezingcono zokuthetha ngamatyala ayo. Nangona kunjalo, iiveki ezimbalwa kuya kufuneka zigqithise ukubona ukuba yintoni le meko ikhethekileyo kukuba amaziko oluntu ahamba kuwo. Ukuba ilungisiwe, inokuba yinto eyomeleleyo kwingeniso yaseYurophu yokuvelisa enye inyuselo ephezulu ngaphambi kokuphela konyaka.
Omnye wabaxhamli abakhulu kule meko ngokungathandabuzekiyo uya kuba ziibhanki ezinokuphelisa unyaka ngcono kunokuba beqale. Ayilolize, lelinye lamacandelo ashiye i-euro ezininzi endleleni kwezi phantse iinyanga ezilishumi elinambini. Ngokuhla kwezinye ii-indices zesitokhwe ngaphezulu kwe-10%. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lelinye lamacandelo kwiimarike zezemali kunye nesona siphakamiso siphambili ngabahlalutyi bezemali. Ngethiphu yokufumana ubunzima obungaphantsi kwaye oko kukhokelele kwintengiso ngokucacileyo ukugqitha ukuthengwa.
Umngcipheko wokuwa okukhulu
Ngayiphi na imeko, ayingabo bonke abahlalutyi bezemali abanethemba elikhulu malunga nokuvela kwemarike yestokhwe saseSpain kwiintsuku zokugqibela zonyaka. Kodwa, endaweni yoko, bacinga ukuba i-Ibex 35 inokufikelela kumanqanaba asondele kakhulu kulawo akwixesha elizayo. Amanqaku angama-7.000 okanye angama-7.500 XNUMX, ebeka le benchmark kwenye yezona ziphantsi kule minyaka idlulileyo. Ngomngcipheko owongeziweyo wokuba ukwehla kunokuba ne-bearish ngakumbi kunokuba bekulindelwe ngaphambili. Ngokumalunga nayo yonke imiqathango: mfutshane, phakathi kunye nexesha elide nangaphaya kokunye ukujongwa kobuchwephesha kwaye mhlawumbi nakwimbono esisiseko.
Ilinde into enokwenzeka, elinye lamanqanaba ukuya jonga kwezi ntsuku zimbalwa zizayo lelona lifanelekileyo kumanqaku ayi-8.500 XNUMX. Yiyo kanye le nto iyema kuyo kwithontsi lokugqibela ethe yafunyanwa kuyo ngeentsuku zokuqala zikaNovemba. Kungenxa yokuba ukuba kugqithisiwe, ngaphandle kwamathandabuzo, ukwehla kwamanani kwizabelo zeSpain kunokuba kukhulu kwaye kuhambelane nemeko ethembisayo ethe yafunyanwa ngabahlalutyi bezemali. Ngaphandle kwento yokuba iziphumo zeshishini kwikota ephelileyo khange zidanise.
Ilinde isipho seKrisimesi
Ngaphakathi kulo mxholo ngokubanzi, bonke abatyali zimali abancinci nabaphakathi balindele irali elindelweyo yezi holide zeKrisimesi emhlabeni. Kuqheleke kakhulu ukubonakala kwezi ntsuku, kodwa hayi rhoqo njengoko kwenzekile kunyaka ophelileyo, ukuphoxeka kwamawaka kunye namawaka abatyali abafuna ukungena kwiimarike zezemali kwezi ntsuku ngaphambi kokungena kweKrisimesi. Apho ixabiso lezabelo linokuhlaziya malunga ne-8%. Akumangalisi ke, ukuba uninzi lwabo balinde ukuvela kwabo ukuze benze imisebenzi yabo kwaye ke ngaloo ndlela benze ukugcinwa kunenzuzo ngexesha elifutshane kakhulu.
Apho awona macandelo anobundlongondlongo aya kuba ngawona asebenza ngokugqwesileyo ngeli xesha lokunyusa. Okanye, kusilele oko, ezo xabiso zehle kakhulu kunyaka. Kuphi kwakhona kwiibhanki Badlala indima ebonakalayo ekukhokeleni ukonyuka kunye nokuhlisa isaphulelo ngoku abarhweba ngaso kancinci. Kwelinye icala, amaxabiso ezobuchwephesha zezinye ezineevoti zokubonisa inkqubela phambili enkulu kwixabiso labo. Ukubeka emngciphekweni iinkampani ezikhuselayo kunye nabo bonke abasebenza njengendawo ezikhuselekileyo ngamaxesha okungazinzi kweemarike zezemali.
Ixesha elifanelekileyo lotyalo-mali
Nangona kunjalo, uDisemba noJanuwari ngokwesiko baneenyanga ezimbini ezintle kakhulu kwiimarike zokulingana. Le yinto yenxalenye elungileyo yabatyali mali abancinci nabaphakathi abathembela ekupheliseni unyaka kakuhle. Nokuba ku akuwona umthetho osisigxina ukuba ihlala izalisekiswa kwaye le yinto ekufuneka uyithathele ingqalelo ukuze ungathathi ukungoneliseki ukusukela ngoku.
Kwenye yeyona minyaka inzima yokutshintshiselana ngesitokhwe samanye amazwe kumashumi eminyaka akutshanje. Apho i-Ibex 35 iya kuthi iphele ngokuhla kwamanani aphindwe kabini. Nangona kungekho kunqongophala kwabahlalutyi beemarike abacinga ukuba emva kwekhosi elibi ngolu hlobo, kulandelwa luvavanyo olukhulu kumaxabiso esitokhwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » I-Brexit kunye ne-Italiya ziya esidlangalaleni kule veki